Nahitsin’ny TV -mpanjakana Rosiana Ny Tao Amin’ny Wikipedia Mba Hanamelohana An’i Okraina Mikasika Fidarabohan’ny Sidina MH17 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2014 14:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Swahili, polski, Magyar, English
Mikisaka any anaty Wikipedia ny ady ao Okraina. Sary nafangaron'ny mpanoratra.
Andro iray taorian'ny fianjerana nampihoron-koditra nanjo fiaramanidina iray tany atsinanan'i Okraina, namoizana ain'olona efa ho 300 latsaka, mafotaka ny fanehoan-kevitra mikasika ny hoe iza no meloka tamin'ny fitifirana ilay fiaramanidina. Samy mifanilika andraikitra daholo ireo mpitarika ao Okraina, Rosia ary hatramin'ireo mpitaky fisintahana ao Donetsk. Tao Kiev, ny filoha Poroshenko dia nanameloka ireo mpihoko any atsinanana sady nanakiana an'i Rosia ho manozongozona ny any an-tsisintany. Ao Maosko, nilaza i Vladimir Putin fa tsy tompon'antoka na kely akory aza amin'izay miseho any Okraina i Kiev. Ireo mpitarika tsy mbola ara-dalana ny Donetsk indray mandà ny fisian'ny andraikiny tamin'ny famelezana ny MH17 an'ny Malaysiana Airlines, amin'ny filazàna hoe tsy maintsy ho ny Tafika An'habakabaka Okrainiana no namely ilay fiaramanidina.
Noho ny “bot” Twitter iray izay manantsinkafona ireo fanitsiana tsy mitonona anarana atao ao ami'ny Wikipedia avy amin'ireo adiresy IP ampiasain'ny governemanta Rosiana, fantatray fa avy aminà solosaina iray ao amin'ny VGTRK no niavian'ny fanitsian-dahatsoratra iray momba ny MH17, VGTRK ilay Orinasam-panjakana misahana fampielezampeo sy fahitalavitra maharakotra an'i Rosia manontolo.
Nhitsin'ny VGTRK ny lahatsoratra iray tao amin'ny Wikipedia momba ilay lozam-pitateram-piaramanidina manao asa ara-barotra.
VGTRK dia toy ny trano fonenan'i Dmitri Kiselyov, izay fantatra , na tsy ofisialy aza, fa lehiben'ny fampielezan-kevitr'i Kremlin. Nalaza i Kiselyov noho ireo kiana mivaivay avy aminy ho an'ny governemanta ao Kiev sy Washington. Nandritry ny krizy tao Krimea, nibontsibontsina indray tao amin'ny fahitalavitra i Kiselyov niteny ny hoe mbola i Rosia aloha izao no “hany manana fahafahana mamadika an'i Etazonia ho vovoka misy taratra mahafaty.” Tamin'ny Jona, mpanao gazety roa tao amin'ny VGTRK no maty tany akaikin'i Luhansk taorian'ny nahavoan'ny baomba azy ireo rehefa nanara-dia ireo mpihoko. Nadiya Savchenko, ilay vehivavy mpanamory angibimby azon'ireo mpitaky fisintahana ho babo tao Okraina ary nafindra tany Voronezh tany ampiandohan'ity volana ity, dia any aminà toeram-pihazonana Rosiana no tànana, voampanga ho nandray anjara taminà fanafihana nahafaty ireo mpanangom-baovaon'ny VGTRK.
Ilay kaonty Twitter nahatsikaritra ny fihetsiky ny VGTRK ety anaty aterineto, @RuGovEdits, dia namolavola “bot” iray hafa, @CongressEdits, izay mihaza ireo fanitsiana atao ao amin'ny Wikipedia ataon'ireo adiresy IP avy ao amin'ny Kaongresy Amerikana. Ny rindrambaiko ho an'ny CongressEdits, noforonin'i Ed Summers, dia rindrankajy misokatra malalaka ary azo amboarina mora foana hifanaraka amin'izay ilàna azy mba hanara-maso ireo fanitsiana tsy mitonona anarana avy amin'ny IP rehetra.